Gbasara anyị - Guangdong Xinzhihui Packaging Technology Co. Ltd.
Guangdong Xinzhihui Packaging Technology Co. Ltd, emi odude ke Dongguan, China. ọ na-ekpuchi 60,000 square meteres. Anyị agafewo afọ iri na isii (site na 2005) na ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa, anyị bụ ndị isi ọkachamara atọ kachasị mepụta ihe nkiri LLDPE Stretch / Pallet Stretch Kechie 100%, na usoro mmepụta 11 na mmepụta 2000T kwa ọnwa.
Anyị nwere usoro siri ike iji chịkwaa ogo na ụgwọ, site na ịzụrụ ihe na usoro mmepụta, anyị nwere ike ịnye ndị ahịa anyị niile, ọrụ dị elu, ọkachamara na ịrụ ọrụ nke ọma na-adabere na ahụmịhe anyị bara ọgaranya na ezigbo ọrụ ọrụ. .
Na-agbaso usoro nrụpụta siri ike ma dị elu, ụlọ ọrụ ahụ jikọtara aha na ogo dị oke mkpa. Ngwaahịa niile bụ isi agafeela asambodo SGS dị ka RoHS & REACH & HALOGEN..A na-eme ihe niile na-arụ ọrụ dịka ISO 9001 (Quality Management System), ISO 14001 (Environmental Management System) sistemụ mma mba ụwa.
Anyị ebighi ebi nchụso na nkwa bụ "Quality nkwa na Ahịa Service" ， Na thyxceptional àgwà ngwaahịa na iche ika aha, anyị na ngwaahịa na-ere niile overChina, na-na ihe karịrị mba 10 n'ụwa nile gafee Asia ， Europe na America.Our ngwaahịa na ọrụ ndị ahịa na-enweta ezigbo aha site na ndị ahịa anyị dịkaHP 、 l.enovg 、 TCL 、 ETON 、 Jabil 、 OD wdg.
Ọkachamara, Lekwasị anya, Ahịa
Ozi sitere n'ezi obi, nlekọta n'eziokwu, ezigbo ọkachamara
Echiche nke akụ na ụba
Mee ụlọ ọrụ ịbanye na ndị ọrụ ya
Pectkwanyere mmadụ ugwu, mee ka ndị mmadụ tụgharịa uche site na uche 、 jikwaa usoro
Ọhụụ ụlọ ọrụ:
Mere ka ọ ghọọ ụlọ na-eduga na nke mba ama ama pallet ụlọ ọrụ nke ndị ahịa tụkwasịrị obi, ịhụnanya ndị ọrụ, nkwanye ùgwù mmadụ.
Ozi priselọ Ọrụ:
Inye usoro ịsọ mpi na ịrụ ọrụ na-asọmpi, na-eme ka ndị ahịa nwee nnukwu uru
Mepụta uru maka ndị ahịa; Mepụta ohere maka ndị ọrụ; Mepụta uru maka ọha mmadụ
Nkuku ụlọ ọrụ
BEbụ onye na-eduzi ihe nrụpụta na ụlọ ọrụ gbasara ngwugwu ụwa
Ihe ngosi akwukwo
Xinzhihui kpebisiri ike ibu onye isi ulo na ndi amara aha ha na ahia nke ， nke na eme ka ndi ahia tukwasi obi, mee ka ndi oru hu n'anya ma mee ka ndi mmadu nwee nkwanye ugwu